भाषणमा अगाडी व्यवहारमा सधैँ पछाडी–नेपालको कृषि « GDP Nepal
भाषणमा अगाडी व्यवहारमा सधैँ पछाडी–नेपालको कृषि
Published On :6August, 2018 4:41 pm
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) अन्र्तगतको कृषी उद्यम केन्द्रको उपसभापति भएर काम गर्दै गर्दा आफ्नो अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न उचित अवसर प्राप्त भएको छ । यतिमात्रै होइन मैले बुझेको कृषि र काम गराइलाई साच्चिकै व्यवहारमा उतार्नका लागि यो अवसर साच्चिकै उपलव्धि मुलुक हुनेछ भन्ने मलाइ लागेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै महासंघले पनि आफ्नो विस्तारलाई व्यापक बनाएको छ ।
अहिले प्रदेश मार्फत काम गर्ने भनेर अहिले बजेट प्रदेशमा गएको अवस्था छ । मुख्य रूपमा कृषि उद्यम केन्द्रले गर्ने एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओपी) र एक गाउँ एक उत्पादन (ओबीओपी) थियो । अहिले अधिकार विकेन्द्रीकरण भएसँगै ती परियोजनाहरू पनि कृषि मन्त्रालयबाट निर्णय भएर सीधै प्रदेशमा गएको अवस्था छ ।
हामीले प्रदेशमा बजेट पठाएका छौँ तर आवश्यक नीति नियम नै बन्न सकेको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा पहिले समयसापेक्ष ऐन कानुन र नियम चाहिन्छ । हामीसंग एक त उचित नियम कानुन नै छैन र अर्कातर्फ भएका ऐन कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब प्रदेश सरकारले जति सक्यो छिटो नीति नियम बनाएर काम गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफ्याड) इटालीमा मुख्य कार्यालय छ, त्यसले गर्ने समृद्धि कार्यक्रम पूर्वका १६ जिल्लाबाट बढाएर अहिले २८ वटामा पुगेको छ । प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा यसको काम निकै प्रभावकारी ढंगले भएको छ । अरू पनि एक–दुईवटा परियोजना सुरु हुने अवस्थामा छन । तर नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न प्रदेशमा कर्मचारीहरू खटाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छैन ।
अहिले केन्द्रले पनि प्रदेशबाट काम गर्न भनेको अवस्था छ । केही परियोजनाले आफ्नो गति लिन सकेका छन् भने कतिपय परियोजनाका लागि ‘हडल्सहरू’ हटाउन काम भएको छ
हामी पनि विभिन्न कार्यक्रममा जान्छौं, त्यहाँ कृषिकै सबैभन्दा पहिले आउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कृषिका विषयमा भाषण दिँदै हिँडेको देखिएको र सुनिएको छ । सरकारले कृषिलाई सहुलियत ऋण दिने भनेको छ तर बैंकले त्यसलाई उचित फलो गरेको छैन । बर्सेेनी सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषिक्षेत्रमा यो र त्यो अनुदान दिने भनिएको हुन्छ, तर त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।
सस्तो लोकप्रियता र भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । कृषि औजारमा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ पनि हटाइँदैछ भन्ने सुनेको छु । सरकारले बोल्दा कृषि भन्ने तर व्यवहारमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेको पाइनँ । म त भन्छु, सरकारले कृषिलाई उपेक्षा गरेको छ । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषिमै आश्रित छन् । हामीकहाँ सेवाक्षेत्रले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको अवस्था छैन ।
कृषि एउटा आशालाग्दो क्षेत्र छ, तर पनि सबैजसो कृृषि उत्पादन आयात गरेरै खाएको अवस्था छ । केही उत्पादन आत्मनिर्भर हुन खोजे पनि त्यहाँ पनि डिस्टर्ब छ । सरकारले जसरी कृषिमा नारा अगाडि सारेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन, नीतिगत सुधार तथा आवश्यक सुविधा दिन सकेको छैन । बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमसमेत उचित प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
उदाहरणका रूपमा चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई लिन सकिन्छ, जसको नेतृत्वमा सम्बद्ध क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा भएका सम्भावना पनि हराएर गएका छन् । हामीभन्दा पछि विकास भएको इथियोपियाले कृषिमा क्रान्ति गरेको छ । धेरैले कृषिका लागि इथियोपियाको उदाहरण लिन थालिसकेका छन् । अहिले धेरै देशका नागरिक कृषि क्रान्तिको अध्ययन गर्न त्यहाँ जान्छन् ।
धेरै नेपाली पनि त्यहाँ पुगेर आइसकेको अवस्था छ । इजरायलले पनि धेरै कार्यक्रममा नेपालीहरू लैजाने, देखाउने गरिसकेको छ । हामीकहाँ सम्भावना भएर पनि सरकार नै पछाडि परेको छ ।
अमेरिकी सरकारको यूएसएडको सहयोगमा महासंघमा कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना भएको हो । स्थापनापछि लगातार कृषिक्षेत्रका विविधि परियोजन सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा जाने भनेर केन्द्रलाई छनौट गरी केही कार्यक्रम दिएको थियो ।
त्यसले राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ । जस्तै एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओेपी) मा जुनार सुन्तला, केरा, छुर्पी, डेरीका प्रोडक्ट तथा हिमाली उत्पादन गरी झन्डै ४०र४५ जिल्लाका उत्पादनलाई फेमस नै बनाएका थियौँ । सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो संरचना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छ । सरकारले गरेका कामहरू असफल भएको अवस्थामा महासंघको मेकानिजम प्रयोग गरौं भनियो, जसले नतिजा पनि राम्रो दिएको हो । तर, सरकारले निरन्तरता भने दिन सकेन । एकातर्फ गरेजस्तो पनि गर्ने, नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ फेरि पुरानो एजेन्डा नै बिर्सने प्रवृत्ति छ ।
सरकारको नीतिमै निरन्तरता छैन । हामीसँग सम्भावना भएका धेरै उत्पादनमध्ये चिया, कफी, डेरी उत्पादनले राम्रो गरेको अवस्था छ । जुन उत्पादनले गति लिन थालेको छ त्यसलाई सरकारले वैज्ञानिक ढंगले उत्पादन अझ बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ, तर त्यसो गरेको पाइँदैन । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने भनेको नै आफूसँग भएका सम्भावनालाई उजागर गर्दै आत्मनिर्भर बन्दै जानु हो । सम्भावित क्षेत्रलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ र विकासका लागि सरकार आफैंले पनि आवश्यकताअनुसारको लगानी गर्नुपर्छ ।
विकसित देशमा देशमा पनि आयात नहुने होइन, हुन्छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खाद्यान्न आयातमा लाग्ने गरेको छ । हाम्रो त बायो डाइभर्सिटी जमिन छ, धेरै किसिमका नगदे बाली लगाउन सकिन्छ । अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिभरजस्ता कम्पनीलाई आकर्षण दिन सक्नुपर्यो । ती कम्पनीहरूले नेपालको प्रोडक्ट लिएर बजारीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो अनि मात्रै कृषिमा लागेको जमिनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारले साँच्चै कृषि क्रान्ति ल्याउने हो भने कृषि औजार, मलखाद, मेसिनरी तथा कृषिसम्बन्धी उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिनु जरुरी छ ।
योसँगै विदेशमा गएका हाम्रा दाजु, भाइबहिनीलाई यहाँ आए आफ्नो सीपबाटै उनीहरू स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । तिनका लागि पनि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच दिनुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा हाम्रो देशका दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा कार्यालयहरू छन्, तिनले पनि आफ्नो देशका उत्पादनलाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । कृषिलाई दिने ऋणको भोलुम बढाउनुपर्छ र दिने प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई सरकारले बढावा दिनुपर्छ । व्यावसायिक खेती हुनासाथ उत्पादन लागत घटेर आउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेर आउँछ । दुईरचार कठ्ठाको जमिनमा खेती गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्न ।
महासंघजस्ता संस्थालाई पनि पीपीपी मोडलमा सहभागी गराएर गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्छ । बोलेर होइन, सबै क्षेत्रबाट व्यावहारिक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्रै कृषि निकट भविष्यमा कृषिबाट पनि अर्बपतिहरू जन्मनेछन् । अहिले ४१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसको आम्दानी १ अर्बभन्दा पनि कम छ । काठ पनि अहिले विदेशबाट प्रयोग गरेको अवस्था छ । विदेशमा सबैले आफ्ना काठ प्रयोग गरेका छन् ।
आयातभन्दा पनि आफ्नो काठ प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । काठ प्रयोग गर्दा, वेदर प्रुफ पनि हुने र भूकम्पबाट क्षति न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा जंगलहरूको संरक्षण भयो, तर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याउन सकिएन । गलत हिसाबले तस्करी हुने र काठ हराउने भएका छन्, तर उचित रूपमा व्यवसायीकरण गरेर आय आर्जन गर्ने काम भएको छैन । कृषिसँगसँगै वनलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ ।
तपाईहरू सबैको अथक मेहनतबाट आज यहाँसम्म आइपुगेको महासंघको गौरवपँर्ण ५३ औं वार्षिक साधारण सभा आफैमा
अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसी धङधङी, भ्याटमा बहुदर सम्भव छः पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर
नवीन्द्रराज जोशी भन्छन्– ओली सरकारलाई विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उद्योगमन्त्री पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारले पर्याप्त छलफल र
आफैंले मागेका ऐन आउँदा पनि हामीले किन दीपावली गर्न सकेनौं ?
कृष्णलाल महर्जन नेपालको चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमा ५० वर्ष नाघेका थोरैमात्र संघ संगठनहरु छन् र त्यसमध्ये